Lutho neze kukhona okungenani eyodwa fan kakhulu uchungechunge oluthi "Vampire Diaries", okuzodingeka ukuchaza ngubani Tayler Lokvud. Ekuqaleni kwesizini lokuqala ethandwa show uhlamvu livela nje phambi kokuba ababukeli sengathi ingane ichithekile kusukela lomkhaya ocebile, kodwa kancane kancane iqhawe ivula iziqondiso amasha kanye ezingalindelekile. Man, werewolf, hybrid - othile nje akakavakasheli endaweni "vampire" umdlalo we-TV umlingisi Maykl Trevino. Yini mayelana uhlamvu nendoda eyayidlala laziwe?
Tayler Lokvud: Umndeni
Inganekwane ethile ithi kanye edolobheni Mystic Falls lakhiwa imizamo imikhaya eminingana kamuva ubani wathi umsunguli. Tayler Lokvud kungenxa esinye salezi imikhaya iyona kuphela ingane uCarol futhi Richarda Lokvudov. Ekuqaleni kakhulu uchungechunge oluthi "Vampire Diaries" ngesikhathi ingane nobuhlobo obuhle nonina, ngenkathi uyise imeya ezingomashiqela wayengumuntu njalo okushayisanayo. Ekupheleni isizini yokuqala, Tyler kushonelwa ubaba wakhe, hhayi ukukwazi amthethelele kokushaywa njalo, iMeya Kerol Lokvud uthatha isikhundla, lempumelelo umfazi wabulawa.
Ngenkathi yesibili, ababukeli uyofunda ukuthi imeya oshonile womzalwane Mason, singeke fana him. Tayler Lokvud osondela umalume iyithole umndeni imfihlo esabekayo. It kuvela ukuthi yonke ilungu lwamakhosi lasendulo Lockwood werewolf kuyinto othwala isakhi sofuzo, okuyinto kucushiwe kuphela indlela eyodwa - ngokubulala umuntu. Ngokushesha Mason futhi wabulala ngemva nokwehluleka ukuvikela indodana yomfowabo ozithandayo sesiqalekiso umndeni.
Ty njengabangane bakhe uncamela ubizwe, ine ukubukeka ekhangayo. Izinwele zakhe obunsundu Tayler Lokvud uncamela azifinyezwanga. Amehlo umlingisi - elikhulu elinsundu. Schoolboy ngokwemvelo ekhuthele kakhulu, okuyinto lihlotshaniswa werewolf isakhi sofuzo kuyinto kwezemidlalo amaqembu amane, uhlanganyela lebhola lesikole. Akumangazi ukuthi le nsizwa wavelelwa sibalo kakhulu.
Tai ngokucophelela ukubukela ikhabethe yabo, imithombo yezimali lomkhaya uyivumele ukukhetha izinto zikanokusho ezibizayo, egcizelela umzimba wayo mncane. Akumangalisi-ke has a lot of abalandeli phakathi nengxenye besifazane edolobheni Mystic Falls.
has kanjani uhlamvu Tayler Lokvud? Biography uhlamvu ebonisa ukuthi kukho konke ukuphila bamhola ngu Ubumnene exuberant ngofuzo uyise, futhi ngenkani eminyakeni ukunqanda "isilo kwangaphakathi" yabo. Tai njalo ehileleka izingxabano nabanye, okuyinto ngokuvamile bagcina ukulwa. Njengoba ngokuvamile kwenzekani ezinganeni eziphuma emindenini ecebile, ke spoilt, uye njalo wabonisa bokuphakama yayo phezu kwabanye, frivolity.
Nokho, ababukeli abanengi bayofunda uhlamvu efana Jr. Lockwood, izimfanelo ezinhle kabanzi uyivule. Ngenkathi yesibili, Tyler ekugcineni ivumela yena ukuhlala nomusa ube nokunakekela, kwembula uqobo njengoba umngane omkhulu, indodana okhathalelayo. Nokho, uhlamvu izici zayo ezingezinhle, ngoba ngaso sonke isikhathi uthola siyongena engozini, musa zinyamalale.
Tayler Lokvud - Star School of Mystic Falls, ilungu lebhola wendawo. Akumangalisi-ke has a lot of abangane, wayehlale sizungezwe amantombazane. Nokho, kuphela umngane umlingisi ekuqaleni kakhulu uchungechunge oluthi "Vampire Diaries" kuyinto Math Donovan - umfana evela emkhayeni ompofu, ngokuba induna iqembu football Ty.
Ubungani ezisetshenziswa yila madoda amabili ezihluke njalo evivinywa, ngokuvamile ziyaphikisana phakathi kwabo zenzeka ngenxa iphutha Tyler. Ngokwesibonelo, i-eside isikhathi buddies bayayeka ukukhulumisana ngemva Math uthola umngani, ukuqabulana unina Kelly.
Njengoba indaba Tyler, kukhona enye - Dzheremi Gilbert. Ngokuthakazelisayo, ubuhlobo yasekuqaleni phakathi kwalezi zinto zombili protagonists uchungechunge ziye kakhulu buhle ngoba isithakazelo entombazaneni efanayo. Nokho, ngemva kokufa beyizitha kancane ekubeni nabangane.
Ukuguqulwa ibe werewolf
Ukuguqulwa ibe werewolf - hhayi into ukubabela Tayler Lokvud. Esikhathini uchungechunge TV "Le Vampire Diaries", ifunda imfihlo umndeni kusuka uMalume Mason, ngemva kwalokho-ke uthembisa uqaphele hhayi awela esimweni lapho bangambulala umuntu. Nokho, ukugcina isithembiso esivela Taya akusebenzi, ngoba esimweni esiphazamisayo Ketrin Pirs - intombazane yaphenduka vampire ngasekupheleni kwekhulu le-15 leminyaka.
Catherine wayedinga werewolf, angakwazi umhlatshelo ngesikhathi isiko imilingo. Ekuqaleni, Miss Pierce ihlele ukuzisebenzisela izinjongo ezifana uMalume Tyler Mason, kodwa ukufa yokugcina kubangela vampire ukuziqhakambisa umshana wakhe. Katherine uphefumulela esinye isifiso ukuhlasela ku esikole Jr. Lockwood, ezivikela, ngephutha ubulala wakhe. Ngakho Tyler oyenza isiqalekiso ambangela ukuba iphenduke impisi zonke inyanga egcwele.
Amazing isiphetho balindelwe uhlamvu enjalo elikhanyayo, Tyler Lockwood. "Diaries Vampire" - umbukiso lapho umlingisi has isikhathi abe werewolf hhayi kuphela, kodwa futhi hybrid endowed amakhono werewolves nemikhovu eba kule nhlobo ngesikhathi esifanayo. By isebenze isakhi ngaphambilini bozela iqhawe werewolf ikhanga le vampire Kweminyaka Klaus Michaelson, ifika Mystic Falls ekupheleni kwesizini yesibili. Tyler Klaus kwakudingeka umhlatshelo elalenziwa ukuthi uzomvumela ube hybrid. Nokho, lokhu uhlamvu isiphetho ukhulula Damon Salvatore, ngubani ukhulula kuye amahora ambalwa ngaphambi kokuba umkhuba.
Klaus namanje ekwazile ube hybrid, bese izama ukwenza ibutho izidalwa njengazo. Tyler iyona werewolf kuqala, okuyinto Michaelson ekwazile ukwenza hybrid. vampire Original bemlindile besho izifungo zokwethembeka, kodwa Lockwood livukela umdali wakhe. Ty uphatha ukuphula isixhumanisi umdali, kodwa engekho akufezi lokhu nganoma izindleko zokuphila kanina, okungadingi ohlaba Klaus uthukuthele. Umzamo Lockwood sika okuziphindiselela ngokufa uCarol Michaelson ehluleka.
Ekuqaleni kwesizini Tayler Lokvud kuyinto nesoka lakhe intombazane Vicki, ngubani udadewabo Math. Lezi ubudlelwane, ukhetha ufihle kwabanye, njengoba abazali wawungeke ukwamukele ubudlelwane bakhe, intombazane evela emkhayeni ompofu uphoqelekile ukuba sizosebenza njengothisha uweta. Ukuze Vikki love it vies naye Dzheremi Gilbert, futhi uthando naye. Phakathi isizini Vicki iba vampire ngomyalo wabaholi wakhe ukuba ngiphuze igazi Damon wakhe, khona-ke ubulala Stefan, ukuvikela ke kusukela Jeremy no-Elena Gilbert.
Ngenkathi wesibili nowesithathu, Tyler ihlangana ne Kerolayn Forbs, owayeyintombi komngane wakhe Math. Abantu abasha nibuthana, uma Caroline kusiza Ty wazibonela ukuguqulwa zayo zokuqala zibe werewolf. Nokho, umbhangqwana amakhefu ngenkathi yesine, njengoba Lockwood ugxile Klaus ukuziphindiselela lokubulala unina, badonswa, baphuma intombi yakhe.
Yiqiniso, izethameli ngizibuza ababedlala uhlamvu elinjalo eliqhakazile, Tyler Lockwood. Igama samanje umlingisi - Maykl Trevino, wazalwa Wakhulela edolobheni elincane i-State of California, kwenzeka ngo-January 1985. Ngiseyingane, uMichael yanjalo eziletha ummeli, usosayensi, lo msubathi. Phakathi kwezinye izinto zokuzilibazisa akhe dancing, phezu kwamagagasi, ukudoba ekujuleni kolwandle. Nokho, ekufezeni indoda ezikhangayo abasha njengesibonelo yabakhanga abenzi mafilimu.
Kumanje uye wakwazi ukudlala "Tayler Lokvud" Bangaki movie ne-TV? Lo mlingisi, ogama biography lembula ukuthi ngokuvamile kungabonakala "ewuchungechunge" kunangesikhathi amabhayisikobho, ngesikhathi sangempela bangaziqhayisa badlale abalingiswa 20. isimo Star aluthola emva uchungechunge lokuqala, "The Vampire Diaries." It kungabonakala nakulokho emisebenzini enjengalowo ithelevishini ngokuthi "yoqobo", "Escape", "Amathambo," "I Mentalist."
Ama-movie ne Matveeva Evgeniya. Biography zokuphila umlingisi komuntu siqu